ma jiraann daawooyin hargab ee dabiiciya?
DAAWOOYINKA DABIICIGA EE HARGABKA
Ma rumaysanaysaaa in calaamadaha hargabka ee aad kuu dhibaya eey ka midyihiin boogsashada dabiiciga ee jidhku maro markuu la dagaalamayo viruska sababa hargabka iyo kasoo kabsashada. hadaba si dabiiciga ma isku daaweeyn kartaa hargabka ?.
1. Cabitaanka biyo badan: biyo badan oo lacabaa waxay ka saameeyn weyn ku leedahay badinta saamiga dheecaan ee jidhka iyo fududeenta shaqooyinka jidhku qabto sidoo kale waxay u fiicantahay qoynta neefmareenka sare iyo sanka iyo cunaha taasoo fududeeneysa duufka iyo xaakadu inay si fudud u dareeraan.
2. Nasasho badan: cilmibaaris cusub oo lagu sameeyay jaamacada california, san fransisco ayaa waxaa lagu ogaaday in hurdada iyo nasashada dheeriga ah aay ka qayb qaadataan ka doorsashada hargabka , sidoo kale hurdada dheeriga ah xiliga hargabku ku hayo waxay xoojisaa difaaca jirka ee la dagaalamaya xanuunka.
3. Cuntooyinka dabiiciga sida malabka, toonta, liin dhanaanta
Toonta: Toontu waxay daawo iyo ka hortagba u tahay hergabka, waxaa ku jirta maado loo yaqaan allicin taasoo ka hortagta xanuuno dhowr ah oo hergabku ka mid yahay.
Malabka: Malabku wuxuu u fiican yahay cuncunka dhuunta iyo riiraxyada. malabka waxuu hodan ku yahay maadooyinka enzymes iyo fiitamiino. Sidoo kale wuxuu ka difaacaa qufaca iyo hergabka khaasatan cabburka iyo lasootooska qufaca xilliyada habeenkii.
Sanjabiisha: waxay joojisaa qufaca waxayna yareysaa cuncunka dhuunta. Waxaa ku jiraa maadooyin loo yaqaan “gingerols” oo hargabka u fiican.
Liin dhanaan: liin dhanaanta waxaa ku jira Fiitamiin C oo yareeya qufaca iyo hindhisada sidoo kale waxay xoojisaa difaaca jidhka
Biyo kulul oo milix leh: ku luluqashada biyaha kulul ee milixda lehwaxay u fiicanyihiin dhuun xanuunka isla markaana qayb ka qaataan inay dilaan jeermiska.
W/Q: Abdirahman jama
Tags: common cold, daawada, dabiiciga, hargab, natural, remedies
Previous PostSaaxiibtinimada (friendship) Q1-Hordhac
Next PostHurdo yarida!
CALAAMADA IYO QAABKA LOO BAADHO MADAX XANUUNKA Q3aad.
Saaxiibtinimada (friendship) Q1-Hordhac
Muhiimada caafimaad ee Canbaha (boqorka khudrada)
Quruxi waa diin.